नेकपा पाल्पाकाे सूर्य बुलेटिन मुख्यमन्त्रीबाट बिमाेचन – Sero Fero News
Home/Trending News/नेकपा पाल्पाकाे सूर्य बुलेटिन मुख्यमन्त्रीबाट बिमाेचन
November 30, 2019	Trending News, प्रदेश ५, मुख्य समाचार Leaveacomment 91 Views
पाल्पा, मंसिर १४
नेकपा पाल्पाकाे प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभागद्वारा प्रकाशित सूर्य बुलेटिन बिमाेचन भएकाे छ । शनिबार पाल्पाकाे तानसेनमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले बुलेटिनकाे बिमाेचन गरेका हुन् ।
बुलेटिन बिमाेचन गर्दै मुख्यमन्त्री पाेखरेलले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश नं. ५ ले सबैभन्दा बढी ७ दशमलव ७ आर्थिक वृद्धी गरेको बताए । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ छ । ‘नेकपाको सरकार भएकै समयमा यही सरकारले ‘डबल डिजिट ग्रोथरेट’ ल्याउँछ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, नेपालले अब दुई अंकको आर्थिक वृद्धी गर्दै छ, त्यसमा पनि प्रदेश नं. ५ पहिलो नै हुन्छ ।’
देश विकासको बाटोमा अग्रसर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी–पोखरा डेलिकेटेड सडक बन्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘डेलिकेटेड सडक विस्तारको लागि प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको यो सडक अब १० मिटर पुरा कालोपत्रे हुनेछ । यसपछि जनताले खोजेका धेरै विकास अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् ।’ नेकपा पाल्पाको बुलेटिन बिमोचनका क्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकका आधारमा विश्व अध्ययन गरेको बताउँनेहरुका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको बताए ।
सोही अवसरका बोल्दै पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले देश विकास नेकपा सरकार भएकै समयमा सम्भव रहेको बताए । प्रदेश ५ का प्रदेश सभा सदस्य नारायण प्रसाद आचार्यले नेकपा पाल्पाले आफ्नो सरकारले गरेका विकास कार्यक्रम र जनचेतना वृद्धि गर्न बुलेटिन प्रकाशनमा ल्याएको बताए । प्रचार विभाग संयोजक गुराँस आत्रेयले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेर आफूहरु अगाडी बढेको बताएका थिए ।
तस्वीरः पाल्पाको तानसेनमा सूर्य बुलेटिन विमोचन गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री ।
Previous पाल्पामा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना
Next सिद्दार्थ लाेकमार्ग छेउका स्थानीय तह एकजुट हुँदै